Ragga Bidaarta Leh Oo La Ogaaday In Ay Ka Saamayn Iyo Kalsooni Badan Yihiin Kuwa Aan Bidaarta Lahayn!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Ragga Bidaarta Leh Oo La Ogaaday In Ay Ka Saamayn Iyo Kalsooni...
Daraasad dhawaan daaha laga rogay ayaa muujinaysa in Ragga bidaarta lihi ka Kalsooni iyo Saamayn badan yihiin kuwa kale ee aan Bidaarta lahayn. Daraasaddan oo muddo badan lagu hawlanaa ayaa muujinaysa in Ragga Bidaarta lihi Awood Maskaxeed, Go’aan qaadasho, Saamayn iyo Kalsooniba ka badan yihiin dhiggooda aan bidaarta lahayn ama mar walba ku dadaala in ay timahooda dhaqaaleeyaan ee ku dadaala ilaalintooda. Daraasaddan oo laga qaaday in ka badan Kun Nin oo isugu jira kuwo bidaar leh iyo kuwo aan lahayn ayaa lagu ogaaday in Ragga bidaarta lihi Kalsooni buuxda ku qabaan naftooda oo ay kuwa kale ka kalsooni badan yihiin xagga saamayntana ka saamayn bateen kuwii kale. “Dareenka Ragganimo ee ay qabaan ayaa ka badan ragga aan bidaarta lahayn. Damaca iyo doonista badan ayaa si weyn ugu qarsoon laabaha Bidaarleyda. Dhinaca kale waxa daraasaddan lagu ogaaday in Ragga bidaarta lihi naftooda ka hanan ogyihiin kuwa kale taasina muujinayso astaan qurux badan oo ay ragga kale dheer yihiin” Sidan waxa yidhi Gadh-wadeenka kooxda daraasaddan samaysay oo lagu magacaabo Jim Williams oo ah Bare sare oo ka hawl gala Kulliyada Cilmi-nafsiga ee Jaamacadda Harvard ee dalka Maraykanka oo u warramayay wargeyska The Researcher. Wargeyskan oo daraasadan sii wata natiijada ka soo baxday waxa uu sheegayaa in baadhitaanka dhinaca cilmi nafsiga ah ee lagu sameeyey kooxdan Ragga ah ee isugu jiray kuwa Bidaarta leh iyo kuwa aan lahayn waxa lagu ogaaday in Ragga bidaarta lihi ka doonis badan yihiin in ay noqdaan hogaamiyayaal ragga aan bidaarta lahayn. Doonista hogaamineed ee kooxda Bidaarta lihi muujisay ayaa noqonaysa astaan Togan oo Raganimada xidhiidh la leh. Sifooyinka Raganimo ee Ragga bidaarta lihi aad ayay y sarraysaa waxaana daraasaddan lagu ogaaday in haween badan oo wax laga waydiiyay dareenkooda ku aadan Bidaartu in ay muujisay in haweenku si weyn uga haybaystaan Ragga bidaarta leh marka la barbar dhigo kuwa Timaha Leh. Guddoomiyaha Cilmibaadhistan hogaaminayay kooxda soo saartay waxa uu xusay in Haweenka ay soo jiidasho badan yihiin marka laga hadlayo dhinaca Bidaarta waa raga Bidaarta leh ee madaxa dhukurta gaar ahaan waxa qiimayntaasi ugu badnayd dalalka Marayakanka iyo Yurub taasise waa ay ka duwan tahay dalalka Afrika iyo Asia.